Khuphela i-WhatsApp ye-iPhone simahla, yifumane apha! | IPhone iindaba
Whatsapp ye-iPhone Lulwalamano olunenzondo nothando oluye lwandiswa kwiminyaka edlulileyo. Siyakhumbula ukuba uWhatsApp wafika kwiVenkile ye-App ka-iOS ngo-2010. Ekuqaleni, esi sicelo sasineendleko ze- $ 0,99, kwaye enkosi kwintlawulo, uthathe ithuba lokuba usebenzise isicelo sobomi bakho bonke. Nangona kunjalo, ngaphezulu kweenyanga, i-Android yathandwa njengogwebu, kwaye i-WhatsApp yayisele ikhule ngokwaneleyo ngenxa yeentlawulo kwiVenkile yeVenkile ukwandisa ukuya kumhlaba kaGoogle. Ke ibinjalo, kwaye yafika kwiVenkile yokuDlala kuGoogle enento entsha, ibisimahla kwaye isiya kwindlela yobhaliso yonyaka ye- € 0,99.
Indlela ye-Android yayixabisa kakhulu ekuhambeni kwexesha, kwaye yaphela isiya kwi-iOS nayo, nangona ixeshana. I-WhatsApp ihlale kuphela unyaka igcina ukubhaliswa kwe- € 0,99, ngakumbi de i-Facebook ithathe ubunini bayo. Ukusukela ngoko I-WhatsApp isimahla kuwo onke amaqonga.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ikwaye, i-WhatsApp ye-iPhone ivukile eluthuthwini, iphinda ishiye ukushiyeka kuphuhliso ebisokola, ukongeza imisebenzi efanayo okanye nangaphezulu kwale siyifumanayo ngokomzekelo kwi-Android. Ndiyabulela koku, isicelo siya sisiba sithandwa, into abaninzi abangayaziyo yile UWhatsApp wazalelwa kwi-iPhone, kwaye lonke uzuko lwayo kwiifowuni zeApple.
1 Khuphela i-WhatsApp ye-iPhone mahala
2 Ungayihlaziya njani i-WhatsApp kwi-iPhone
3 Iimpawu ezintsha ze-WhatsApp ze-iPhone
Khuphela i-WhatsApp ye-iPhone mahala
I-WhatApp ye-iPhone isimahla, Akukho mbuzo kulo mbandela, kwaye yeyona iklayenti yomyalezo ithandwayo kwangoko kwintengiso, yaba liqonga lasimahla emva kokufunyanwa nguWhatsApp. Kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ikhulile nakwimisebenzi, ngoku singenza iminxeba ngoWhatsApp, sigqithise iifayile zePDF kunye .docx, kunye nokufika kweefowuni zevidiyo kulo nyaka ka-2016 kulindeleke kwiWhatsApp ye-iPhone.
Nangona kunjalo, i-iOS iseliqonga elincinci, ngenxa yoko, ekuphela kwendlela ekhoyo ngoku ukufaka iWhatsApp Ivenkile yeeVenkile. Ukufikelela eli khonkco unokukhuphela i-WhatsApp ye-iPhone simahla. Kananjalo, iapps ihlala ikwishumi eliphezulu kwicandelo lokubetha simahla kwiVenkile ye App. Impumelelo yayo iyakhula kwaye ikhula ngokuhamba kwexesha, kunye nohlaziyo lweWhatsApp, ezinje nge "bugifxes" zayo ezidumileyo, musa ukuyeka ukwenzeka ukwenza izinto ezintsha.
Ungayihlaziya njani i-WhatsApp kwi-iPhone
Kubasebenzisi be-iOS, hlaziya i-WhatsApp ye-iPhone Iya kuba yinto eqhelekileyo, uhlaziye zonke izicelo ezikwi-iPhone kule nkqubo inye. Eyona nto ibalulekileyo kwizicelo kwi-iOS Ivenkile yosetyenziso, ke ngoko, amanyathelo okuqala ekufuneka siwathathe ukujonga ukuba sinento esinokuyihlaziya na yiya kwiVenkile ye App.
Kwicandelo lasezantsi lasekunene, sifumana ukhetho "uhlaziyo"Nje ukuba sicofe kuyo, kuya kuvela uluhlu kunye nolunye uhlaziyo lwesicelo esinalo, sinako" ukuhlaziya konke "okanye ukhethe nganye kwezi sifuna ukuzihlaziya kwaye zeziphi ezingekhoyo. Kwimeko apho sidibana I-WhatsApp yokuhlaziya kwi-iPhone, kufuneka nje siyicinezele.
Nangona kunjalo, kwicandelo loseto lwe-iPhone, ukuba siya kwiVenkile ye App, siya kuba nenketho download ngokuzenzekelayo kwaye ufake uhlaziyo Izicelo.
Iimpawu ezintsha ze-WhatsApp ze-iPhone
Ukufika kwe-iOS 10 kunye ipakethe entsha ye-emoji ichaphazela i-WhatsApp kuhlaziyo ngalunye, kwaye ii-emoticons ezintsha ze-WhatsApp ze-iPhone ziya kusivumela ukuba sizidlulisele ngakumbi iimvakalelo zethu. Enye yezona zinto zilindelwe kakhulu ekufikeni kwepakethi ye-WhatsApp ye-iPhone yi-paella.
Kwelinye icala, siyakuba nesonka, igorila kunye nomkhombe. Ukulingana ngokwesini kukwabonakalisiwe ngokufanayo kwi Iimpawu ezintsha ze-WhatsApp ze-iPhone, kwaye siyabona amadoda anesithsaba. Kwelinye icala sine-emoji ehlekisayo eya kuvuthela impumlo yakho ngengqele, kunye ne-emoji ebambe ukugabha, into uninzi lwethu ebelufuna ukuyisebenzisa ukusukela oko kwasweleka i-MSN Messenger, kwaye ekugqibeleni ifike kuWhatsApp nge-iOS 10 ukusukela ngeJuni ka-2016, kunye nee-bet 10 ze-iOS.